मासिक ८५ हजार तलबसहित साना किसान विकास लघुवित्तले कर्मचारी माग्यो, योग्यता कति चाहिन्छ ? - krishipost.com
मासिक ८५ हजार तलबसहित साना किसान विकास लघुवित्तले कर्मचारी माग्यो, योग्यता कति चाहिन्छ ?
साना किसान विकास लघुवित्तले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । कम्पनीले व्यवसाय प्रवर्द्धन अधिकृत पदको लागि ११ जना कर्मचारी माग गरेको हो ।
कम्पनीले मासिक ६० हजार तलब र भ्रमण भत्ता तथा घर भाडा गरी मासिक ८५ हजार प्रदान गरिने जनाएको छ ।
योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले तह विज्ञापनमा दिइएको ठेगानामा पुग्ने गरी १५ दिन भित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीले प्रकाशन गरेको विज्ञापन हेर्नुहोस्:-